Bit By Bit - Sava lalana - 1.5 Outline ao amin'ny boky
Ity boky ity dia voalamina manodidina ny fivoarany amin'ny alalan'ny fikarohana ny sakany efatra fomba: mijery fitondran-tena, mametraka fanontaniana, mihazakazaka fanandramana, ary mamorona fiaraha-miasa faobe. Ireo efatra ireo fomba rehetra nampiasaina tamin'ny endrika sasany 50 taona lasa izay, ary matoky aho fa izy rehetra ampiasaina amin'ny endrika sasany 50 taona manomboka izao. Nanolo-tena aho isaky ny toko iray ho fomba. Maro ny toko manana fizarana natokana ho fanehoan-kevitra bebe kokoa, ny ara-teknika na ara-tantara fanazavana fanampiny, ary ny fiaraha-mientana izay azo ampiasaina ao amin'ny kilasy na ho an'ny tena-hianatra. Noho ireo endri-javatra, handeha aho mba hitandrina ny lehibe lahatsoratra tsotra araka izay azo atao; dia afaka manondro ireo faritra hafa ao amin'ny toko raha te antsipirihany bebe kokoa sy Citations an-boky sy gazety.
Ao amin'ny toko faha-2 (Nanatri-maso ny fitondran-tena), Izaho no mamaritra ny zavatra sy ny fomba azo ianarana avy amin'ny mpikaroka mandinika ny fitondran-tenan'ny olona. Indrindra indrindra, aho hifantoka amin'ny soritry nomerika tahirin-kevitra sy fitantanana ny fikarohana tahirin-kevitra izay tsy nanana anjara tamin'ny famoronana ny tahirin-kevitra. Aho mamaritra ny lafiny iraisana karazana tahirin-kevitra ity, ary manazava aho tetika fikarohana izay azo ampiasaina mba pahombiazana mianatra avy nandinika ny fitondran-tena.
Ao amin'ny toko faha-3 (Fametraham-panontaniana), dia hanomboka amin'ny alalan'ny fanehoana ny zavatra mpikaroka afaka mianatra amin'ny alalan'ny fandinihana mifindra mihoatra fitondran-tena, ary manomboka fifandrindrana amin'ireo olona. Indrindra indrindra, no milaza fa misy sarobidy manao fanadihadiana fikarohana, na dia ao amin'ny tontolo iray efa misy asa tanana miaraka amin'ny tahirin-kevitra nomerika. Dia hamerina hijery ny nentim-paharazana fanadihadiana diso tanteraka rafitra ary mampiasa azy io mba handamina ny fivoaran'ny taona izay manome fahafahana ny nomerika ho an'ny fanadihadiana fikarohana. Indrindra indrindra, dia mampiseho ny taona nomerika Mety hitarika ho amin'ny fiovana lehibe eo amin'ny santionany sy ny dinidinika. Farany, aho mamaritra tetikady roa noho ny fanakambanana Ny valin'ny fandinihana natao miaraka amin'ny angon-drakitra soritry nomerika. Na dia eo aza ny tafahoatra fa misy fanadihadiana mpikaroka mahatsapa amin'izao fotoana izao, manantena aho fa ny vanim-potoana nomerika no ho ny volamena taona ny fanadihadiana fikarohana.
Ao amin'ny toko faha-4 (Running fanandramana), dia hanomboka amin'ny alalan'ny fanehoana ny zavatra mpikaroka ianarana rehefa mifindra any an-dafin'i mitandrina ny fitondran-tena sy ny fametrahana fanontaniana fanadihadiana. Indrindra indrindra, dia mampiseho ny fomba randomized fanandramana-toerana ny mpikaroka hanitsy eo amin'izao tontolo izao amin'ny fomba tena manokana-hahafahan'ny mpikaroka mba hianatra momba ny causal ny fifandraisana. Dia ampitahao ny isan-karazany ny andrana fa afaka manao tamin'ny lasa amin'ny isan-karazany izay azontsika atao izao. Rehefa heverina izany, aho mamaritra ny varotra-offs tafiditra ao amin'ny tetikady roa lehibe ho an'ny nitarika dizitaly fanandramana. Farany, aho hanatsoaka hevitra amin'ny famolavolana ny sasany toro-hevitra mikasika ny fomba azonao manararaotra ny tena herin'ny nomerika andrana ary farito ny sasany amin'ireo andraikitra izay tonga miaraka izany hery izany.
Ao amin'ny toko faha-5 (Mamorona faobe fiaraha-miasa), hasehoko ny fomba afaka mamorona faobe mpikaroka fiarahamiasa-toy ny crowdsourcing sy ny olom-pirenena momba ny siansa-in mba hanao fikarohana momba ny fiaraha-monina. By milaza mahomby faobe fiaraha-miasa tetikasa sy amin'ny fanomezana vitsivitsy manan-danja fandaminana fitsipika, dia manantena ny handresy lahatra anareo ny zavatra roa: voalohany, izay faobe fiaraha-miasa azo harnessed ho an'ny fiaraha-monina fikarohana, ary faharoa, izay mpikaroka izay mampiasa faobe fiaraha-miasa dia ho afaka hamahana olana izay toa tsy azo teo aloha. Na dia matetika fiaraha-miasa faobe nasandratry ho toy ny fomba mba hamonjy vola, dia mihoatra lavitra noho izany. Lamesa fiaraha-miasa no tsy mamela antsika hanao fikarohana mora; dia mamela antsika hanao fikarohana tsara kokoa.
Ao amin'ny toko faha-6 (Mifehy), dia milaza fa mitombo haingana mpikaroka manam-pahefana mpandray anjara, ary ireo fahaiza-manao ireo manova haingana kokoa noho ny fenitra, fitsipika, sy ny lalàna. Zavatra tsy mitambatra-mitombo hery sy ny tsy fisian'ny fifanarahana momba ny fomba izany hery izany no tokony ho ampiasaina-ravina tsara fikasa mpikaroka ao anatin'ny toe-javatra sarotra. Mba hiatrehana io olana io, dia milaza fa tokony hanangana mpikaroka ny toro lalana ara-fomba. Izany hoe, mpikaroka dia tokony handinika ny fikarohana amin'ny alalan'ny fitsipika efa misy, izay haka araka izay nomena-ary amin'ny alalan'ny fitsipika etika ankapobeny kokoa. Soso-kevitra efatra aho nametraka fitsipika sy etika roa rafitra izay afaka manampy hitarika ny fanapahan-kevitra. Farany, aho ary hadihadiana mamaritra manokana ny sasany etika fanamby izay manantena no miatrika mpikaroka amin'ny hoavy, ary aho manolotra toro-hevitra azo ampiharina ho miasa ao amin'ny faritra amin'ny mitebiteby etika.
Farany, ao amin'ny toko faha-7 (Ny hoavy), dia mamintina lohahevitra telo izay hipoitra indray, manerana toko ka dia izany no ho zava-dehibe indrindra amin'ny ho avy.
Fikarohana ara-tsosialy ao amin'ny vanim-potoana nomerika dia mitambatra ny zavatra nataontsika tany aloha ny tena samy hafa amin'ny fahaiza-manao amin'ny hoavy. Noho izany, ara-tsosialy fikarohana ho miendrika ny ara-tsosialy na ny mpahay siansa sy ny angon-drakitra mpahay siansa. Ny vondrona tsirairay dia manana zavatra ho anjara, ary ny vondrona tsirairay dia manana zavatra mba hianatra.